Iyo data naTim Cook vanoti Apple Watch ndiyo yakatengesa zvakanyanya pasi rose wachi | Ndinobva mac
Ichokwadi kuti hapana dhata rekongiri pane zvekutengesa kweApple wachi nekuti Apple pachayo haidi kuitsikisa, asi ichokwadiwo kuti kune ese wearables iyo yakatanga kutengeswa kare kare Iyo chete inobata yekutengesa inodhonza ndeyeCupertino vakomana wachi. Chokwadi ndechekuti kune vedu vatinotarisa izvi, mumigwagwa idzo dzinoonekwa zvakanyanya maApple wachi uye mamwe ekuverengera mabhandi akaita seXiaomi Mi Band.
Mushure memusangano wezvemari weichi chikamu chechipiri chemari, Apple nemukuru wayo CEO Tim Cook, vanosimbisa kuti kutengeswa kwemidziyo yakaita seApple Watch, maBeats mahedhifoni kana maAirPod anoshamisa. ivo vakura kupfuura 50% mukati megore rega rega.
Cook anoti Apple Watch ndiyo yakatengesa zvakanyanya pasi rose
Kunyangwe zvese data kubva kune vaongorori vakafanotaura kudonha kwakasimba mukutengesa (kwakasimudzirwa nekuderera kwekutengesa kweiyo iPhone X), muchokwadi mhedzisiro yemari yekambani iri yakanaka uye iye CEO pachake akataura kuti manhamba ake pazvipfeko aizoiswa "Fortune 300" chii chaizouya kufunga mibairo inodarika 9.318 mamirioni emadhora. Icho chirevo chakajeka uye Cook akati:
Mamirioni evatengi vanoshandisa Apple Watch kuti vagare vakagwinya, vakagwinya, uye vakabatana. Aya ndiwo maratidziro akaita Apple Watch wachi inotengeswa zvakanyanya pasi rese.
Hatina mubvunzo kuti budiriro yewachi iri pachena uye izvi zvinoratidzwa nekuenderera kwayo mumusika uye nekuvandudzwa kweshanduro nyowani dzinoburitswa gore rega rega. Nenzira, kutaura nezveshanduro nyowani zvinokwanisika kuti gore rino vhezheni itsva yewachi ichatangwa uye zvingave zvakadaro yechina mumutsara kubvira 2015.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo data naTim Cook vanoti Apple Watch ndiyo wachi inotengesa zvakanyanya pasi rose
Dodocol DA150 mutauri, simba uye mhando nemutengo unonzwisisika